Huawei Smartphone တွေမှာ သုံးလာတော့မယ့် Liquid Lens ဆိုတာ.… - PX
Leica နဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းကစပြီး Huawei ဟာ Camera ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ တစ်နှစ်တစ်မျိုး မရိုးရအောင် အသစ်အဆန်းနည်းပညာတွေကို ချပြနိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ အခုလည်း 2019 Huawei Flagship ဖုန်းတွေမှာ Liquid Lens ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေ ကြိုတင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြန်ပါပြီ။ ဒီတော့ Liquid Lens ဆိုတာ ဘာလဲ?
တကယ်တော့ Liquid Lens ဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်လောက်ကတည်းက ပြင်သစ် ရူပဗေဒပညာရှင် Bruno Berge ကနေ စတင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ နည်းပညာပါ။ ဒီနည်းပညာဟာ ကျွန်တော်တို့ဆယ်တန်းမှာသင်ခဲ့ဖူးတဲ့ မတူညီတဲ့မျက်နှာပြင်နှစ်ခုကို အလင်းဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာ အလင်းယိုင်ခြင်းနိယာမကို အခြေခံပြီးဖန်တီးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် Liquid Lens တွေမှာ တခြား Camera တွေလို Mechanical Lens တွေအစား ရေနဲ့ အုန်းဆီလို အဆီကို ရောစပ်ထားတဲ့ Liquid ကို လျှပ်စစ်ဖြတ်သန်းစီးဆင်းစေပြီး လိုချင်တဲ့ပုံစံဖြစ်အောင် ပုံဖော်တဲ့နည်းလမ်းကို သုံးထားပါတယ်။
ဒါဆို Liquid Lens သုံးခြင်းအားဖြင့် ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေ ရနိုင်မလဲ?
– Liquid Lens တွေရဲ့ ပုံစံပြောင်းလဲနိုင်မှုဟာ Mechanical Lens တွေထက် ပိုပြီးမြန်ဆန်တာကြောင့် Focus Speed နဲ့ Accuracy ပိုင်း ပိုပြီးကောင်းမွန်လာမယ်။
– Liquid သီးသန့်ကို အသုံးပြုတာကြောင့် Mechanical Lens တွေထက် နေရာယူမှုပိုနည်းသွားပြီး အရင် Camera တွေကို အပြင်ဖုထွက်နေတာမျိုးတွေ မရှိသလောက် နဲသွားမယ်။
– Mechanical Lens တွေထက် Hardware ကန့်သတ်ချက်နဲပြီး Voltage ပြောင်းရုံနဲ့ Liquid Shape ကို ပြောင်းလဲနိုင်တာကြောင့် Zoom ပိုဆွဲနိုင်လာမယ်။
– နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ Liquid Lens ရဲ့ ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်က Mechanical Lens တွေထက် ပိုပြီးသက်သာနိုင်တာကြောင့်ပါ။
တကယ်တော့ Liquid Lens တွေကို စက်ရုံသုံးစောင့်ကြည့် Camera တွေမှာ အသုံးပြုနေပြီဖြစ်ပေမယ့် Huawei အနေနဲ့ Smartphone Camera တွေမှာ ဒီနည်းပညာကိုအသုံးပြုမယ့်နည်းလမ်းကို 2018, November ကတည်းက မူပိုင်ခွင့်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Huawei အတွင်းပိုင်းကထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအရ Huawei ဟာ RGB, Monochrome နဲ့ TOF 3D Camera တို့ပါဝင်မယ့် Triple Camera Set-up ကို ဖန်တီးနေပြီး Camera အတွင်း Liquid ပါဝင်မှုကြောင့် Liquid Lens သုံးနိုင်ခြေကို အတည်ပြုနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Liquid Lens တွေကို Huawei ရဲ့ Mate 30 series တွေမှာ စတင်မြင်တွေ့ရနိုင်ခြေရှိပြီး တကယ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့ ဒီနည်းပညာဟာ Smartphone Camera တွေအတွက် ကြီးမားတဲ့ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခု ဖြစ်လာတော့မှာပါ။
Huawei Smartphone တှမှော သုံးလာတော့မယျ့ Liquid Lens ဆိုတာ.…
Leica နဲ့ ပူးပေါငျးပွီးတဲ့ နောကျပိုငျးကစပွီး Huawei ဟာ Camera ပိုငျးနဲ့ပတျသကျလို့ တဈနှဈတဈမြိုး မရိုးရအောငျ အသဈအဆနျးနညျးပညာတှကေို ခပြွနိုငျခဲ့သူ ဖွဈလာခဲ့တယျ။ အခုလညျး 2019 Huawei Flagship ဖုနျးတှမှော Liquid Lens ကို အသုံးပွုမယျဆိုတဲ့သတငျးတှေ ကွိုတငျထှကျပျေါလာခဲ့ပွနျပါပွီ။ ဒီတော့ Liquid Lens ဆိုတာ ဘာလဲ?
တကယျတော့ Liquid Lens ဆိုတာ လှနျခဲ့တဲ့ဆယျစုနှဈနှဈခုကြျောလောကျကတညျးက ပွငျသဈ ရူပဗဒေပညာရှငျ Bruno Berge ကနေ စတငျဖနျတီးခဲ့တဲ့ နညျးပညာပါ။ ဒီနညျးပညာဟာ ကြှနျတျောတို့ဆယျတနျးမှာသငျခဲ့ဖူးတဲ့ မတူညီတဲ့မကျြနှာပွငျနှဈခုကို အလငျးဖွတျသှားတဲ့အခါမှာ အလငျးယိုငျခွငျးနိယာမကို အခွခေံပွီးဖနျတီးထားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ Liquid Lens တှမှော တခွား Camera တှလေို Mechanical Lens တှအေစား ရနေဲ့ အုနျးဆီလို အဆီကို ရောစပျထားတဲ့ Liquid ကို လြှပျစဈဖွတျသနျးစီးဆငျးစပွေီး လိုခငျြတဲ့ပုံစံဖွဈအောငျ ပုံဖျောတဲ့နညျးလမျးကို သုံးထားပါတယျ။
ဒါဆို Liquid Lens သုံးခွငျးအားဖွငျ့ ဘယျလိုအကြိုးကြေးဇူးတှေ ရနိုငျမလဲ?
– Liquid Lens တှရေဲ့ ပုံစံပွောငျးလဲနိုငျမှုဟာ Mechanical Lens တှထေကျ ပိုပွီးမွနျဆနျတာကွောငျ့ Focus Speed နဲ့ Accuracy ပိုငျး ပိုပွီးကောငျးမှနျလာမယျ။
– Liquid သီးသနျ့ကို အသုံးပွုတာကွောငျ့ Mechanical Lens တှထေကျ နရောယူမှုပိုနညျးသှားပွီး အရငျ Camera တှကေို အပွငျဖုထှကျနတောမြိုးတှေ မရှိသလောကျ နဲသှားမယျ။
– Mechanical Lens တှထေကျ Hardware ကနျ့သတျခကျြနဲပွီး Voltage ပွောငျးရုံနဲ့ Liquid Shape ကို ပွောငျးလဲနိုငျတာကွောငျ့ Zoom ပိုဆှဲနိုငျလာမယျ။
– နောကျဆုံးအခကျြကတော့ Liquid Lens ရဲ့ ထုတျလုပျမှုကုနျကစြရိတျက Mechanical Lens တှထေကျ ပိုပွီးသကျသာနိုငျတာကွောငျ့ပါ။
တကယျတော့ Liquid Lens တှကေို စကျရုံသုံးစောငျ့ကွညျ့ Camera တှမှော အသုံးပွုနပွေီဖွဈပမေယျ့ Huawei အနနေဲ့ Smartphone Camera တှမှော ဒီနညျးပညာကိုအသုံးပွုမယျ့နညျးလမျးကို 2018, November ကတညျးက မူပိုငျခှငျ့တငျနိုငျခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ Huawei အတှငျးပိုငျးကထှကျပျေါလာတဲ့သတငျးတှအေရ Huawei ဟာ RGB, Monochrome နဲ့ TOF 3D Camera တို့ပါဝငျမယျ့ Triple Camera Set-up ကို ဖနျတီးနပွေီး Camera အတှငျး Liquid ပါဝငျမှုကွောငျ့ Liquid Lens သုံးနိုငျခွကေို အတညျပွုနိုငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ Liquid Lens တှကေို Huawei ရဲ့ Mate 30 series တှမှော စတငျမွငျတှရေ့နိုငျခွရှေိပွီး တကယျဖွဈလာခဲ့ရငျတော့ ဒီနညျးပညာဟာ Smartphone Camera တှအေတှကျ ကွီးမားတဲ့ တိုးတကျပွောငျးလဲမှုတဈခု ဖွဈလာတော့မှာပါ။